शरीरमा कालो धागो बाध्दा फाइदै फाइदा ! – Complete Nepali News Portal
शरीरमा कालो धागो बाध्दा फाइदै फाइदा !
आउनुहोस् शरीरमा कालो धागो बाध्दा फाइदै फाइदा, भन्ने विषयको सामग्री शुरू गर्नु भन्दा पहिला यो मन्त्र उच्चारण गरौँ ः ग्रामे वायदिवारण्ये ये सर्पप्रचरन्ति। नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।।९।।
कालो धागोले मानिसको खराब नजरबाट बच्ने शक्ति प्रदान गर्दछ । शनि ग्रहको सम्बन्ध कालो रङ्ग संग हुन्छ । शनि कालो रङ्गको कारक हो । कालो रङ्गको धागो बाध्ने व्यक्तिको कुण्डलीमा शनि बलशाली र सकारात्मक फलदिने हुन्छ ।